बर्षाले स्वस्तिमाको फुपु बन्न मानिनन् ! « Ramailo छ
बर्षाले स्वस्तिमाको फुपु बन्न मानिनन् !
समय : 4:26 pm
नायिका बर्षा सिवाकोटीको व्यस्तता पछिल्लो समय बढ्दो छ । प्रदर्शन, छायाँकन र प्रि-प्रोडक्सनमा बर्षाकै फिल्महरु छन् । यदि बर्षाका हातमा रहेका फिल्महरु सफल भएमा उनी उदाउँदी स्टार हुनेछिन् ।
यी उदाउँदी स्टारले एक स्थापित ब्यानरको फिल्म भने छाडेकी छन् । बर्षाले विकास आचार्यको ‘नाईं नभन्नू ल ५’ खेल्न गरेको प्रस्तावलाई अस्विकार गरेकी हुन् । किन त ? बुझिए अनुसार बर्षा अर्की नायिका स्वस्तिमा खड्काको फूपु बन्नु पर्ने थियो । स्वस्तिमाको फुपु बन्न आफुलाई सहज नहुने भन्दै बर्षाले फिल्म छाडेकी हुन् ।
‘विकास दाईले कुरा गर्नु भएको थियो । तर गर्न सकिन’, बर्षा भनिन्, ‘त्यो रोलमा आफुलाई फिट ठानिंन फेरी अर्को फिल्मको सुटिङ पनि पर्यो ।’ विकासराज आचार्यकै ‘नाईं नभन्नू ल २’ बाट बर्षा फिल्ममा डेव्यु भएकी हुन् । बर्षाले उक्त रोल नगर्ने भएपछि विकास अर्की नायिकाको खोजिमा लागि परेका छन् । सम्भवतः बर्षा राउतले उक्त रोल गर्नेछिन् ।
प्रदर्शनरत फिल्म ‘गाँजा बाजा’ मा गेस्ट रोल गरेकी बर्षा अभिनित ‘भैरे’ को भर्खरै मात्र गीत रिलिज भएको छ भने ‘जय शम्भु’ को छायाँकन चलिरहेको छ । मिलन चाम्सले निर्देशन गर्ने ‘बिर विक्रम २’ मा पनि बर्षा लिड हिरोइनको रुपमा अनुबन्धित भएकी छन् ।